समाजमा नपच्ने खालका गीत संगीतबाट हामी सजक हुनुपर्छ । | | Satyadeep Sandesh
गृहपृष्ठ समाजमा नपच्ने खालका गीत संगीतबाट हामी सजक हुनुपर्छ ।
भदौ ९, २०७६	|
विगत एक दशकदेखि मोडलिङ्ग क्षेत्र धेरै नै लोकप्रिय भइरहेको छ । मोडलिङ्ग क्षेत्रलाई नै आफ्नो पेशा बनाएर सयौं युवायुवतीहरू अभिनयमा सक्रिय भएका छन् । कोही सफल छन् त कोही असफल । तर मोडलिङ्ग क्षेत्रमा रुचि राख्ने युवायुवतीमा कुनै कमि आएको छैन । मोडलिङ्ग क्षेत्रलाई अभिनय गर्ने पहिलो खुड्किलाको रुपमा लिइन्छ । यस्तै मोडल हुन मन्जिता केसी । सर्लाहीको लालबन्दीमा जन्मिएकी केसी छोटो समयमै म्युजिक भिडियोमा सक्रिय र व्यस्त मोडल हुन बिबिएस तेस्रो वर्ष अध्ययन पुरा गरेकी मोडल के.सी. हाल छ सय वटा म्युजिक भिडियो र तिन वटा चलचित्रमा अभिनय गरिसकेकी छिन् । यसै सन्दर्भमा पछिल्लोे समय निकै नै चर्चामा आएकी मन्जिता के.सी. संग सत्यदीप सन्देशका लागि बसन्तराज बरालले गरेका विशेष कुराकानीको सम्पादीत अंशः
१.तपाई अभिनय क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो ?
विशेष गरी मेरो गृह जिल्ला सर्लाहीमै स्कूलदेखि सानो स्टेज कार्यक्रममा मैले नृत्य गर्ने अवसर पाएको थिए । त्यस क्रममा सबै दर्शकको आकर्षण बढ्दै गयो निरन्तर नृत्य र अभिनयले गर्दा राष्ट्रिय गीत, संगीत र चलचित्रमा अभियन गर्ने मौका पाएँ ।
२.विगतदेखि वर्तमान अवस्था सम्म आइपुग्दा कति म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्नुभयो ?
छ सय भन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा नृत्य गरेको छु । त्यसका अलवा तिन वटा चलचित्रमा अभिनय गरेकी छु ।
३.यस क्षेत्रमा लागेर कत्तिको खुशी हुनुहुन्छ ?
आफुले चाहेको पेशा मा छु । धेरै नेपालीहरुको मायाँ,साथ,सहयोग अनि आफूमा आत्मबिश्वास,आफ्नो व्यक्तित्व विकास यस क्षेत्रबाट पाएकी छु । त्यसैले पनि होला खुशी छु ।
४.नेपाली सङ्गीत भित्रको बिकृति लाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
नेपालि लोकसस्कृती भित्र रहेर,नेपाली लोक लयमा आधारित लोकलाई मन पर्ने गित लोक गित दोहोरि गितहरु नै हुन त्यसैले¬¬¬ यस्ता परिधि बाहिरका कतिपय गितहरुले बिकृती लाई प्रोत्साहन गर्न सक्छन् र लोकसंस्कृतिमा छाडापन आउन सक्छ त्यस्ता खाले समाजलाई असर गर्ने खालका समाजमा नपच्ने खालका गीत संगीतबाट हामी सजक हुनु अनिबार्य छ ।
५.नेपाली सङ्गीतको सम्भावना कस्तो छ ,चुनौतीहरू के–के छन ?
नेपाली संगीत विश्वकै मनमोहक र सुन्दर छ । तर पछिल्लो समयमा पश्चिमी मुलुकका भाकाहरू नेपाली बजारमा ल्याउँदा मौलिकता हराउँछकी भन्ने डर हो । नेपाली मौलिक भाकाहरूलाई प्राथमिकता दिएर टिकेर मेहनत गर्न सकियो भने राम्रो छ ।
६.विशेष गरी हरितालिका तीज पनि आइरहेको छ, महिलाहरूको विशेष चाडपर्वको रुपमा पनि लिने गरिन्छ, यसको महत्वबारे तपाईको धारण के छ ?
हरितालिका तीजको विशेष महत्व छ । तीजमा टाढा टाढाबाट कयौं वर्ष भेट नभएका दिदिबहिनीहरू ठूलो हौसला र खुसीका साथ माइती घरमा जम्मा हुन्छन्, रमाईलो गर्दछन्, एकआपसमा दुःख, सुखका कुरा गर्दछन् । पिर, बेदना, खुसी एकआपसमा बाढ्ने गर्दछन् हुनत आज भोलि फोन, मोबाईल, इन्टरनेटले संसारलाई जोडि सकेको छ । जुनसुकै बेला पनि आपसमा कुराकानी गर्न सकिन्छ तर दुःख, बेदना भन्ने कुरा यस्तो चिज हो जुन आम्ने–साम्ने भएर पोख्दा नै बढि सन्तुष्टि मिल्छ त्यो अवसर तीजले गराइदिन्छ । तीज परिवार मिलनको पर्व पनि हो जसले चेलिबेटी र माईती बीच कुनै दुरी छ भने त्यो मेटाइदिन्छ । अर्को कुरा यो हिन्दु परम्परा पनि हो, समावेशी–समावेश भनेर चिच्याइरहेको आजको समयमा हिन्दु परम्परामा आस्था र विश्वास राख्नेहरूको लागि आफ्नो आस्था प्रकट गर्ने अवसर हो र पुरूष प्रधान समाजमा महिला हक र स्वतन्त्रता प्रति जागरुक बनाउने र आफ्ना भावना गीत र नाँचको माध्यमबाट पोख्ने मौका पनि हो यस कारणले हिन्दु महिलाहरूमा तीजको अत्यन्तै ठूलो महत्व छ ।
७.परम्परागत शैली भन्दा अहिले धेरै भड्किलो रुपमा तीज मनाउने र एक दुई महिना अगाडि नै तीज शुरू भएको भान हुन्छ यो गलत भएन र ?
पक्कै पनि यो अत्यन्त गलत प्रथाको विकास भएको छ यसलाई मर्यादित र अनुशासित बनाउन आम महिला दिदिबहिनीहरू नै अग्रसर हुन जरुरी छ । कम्तीमा पनि अनावश्यक खर्च गरेर अरुको फेशन जस्ताको तस्तै कपि गर्ने बानी त्यागेर सभ्य पर्व बनाउन म सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गर्दछु ।
८.पछिल्लो समय तपाईले अवार्ड पनि हात पार्नु भएको छ उत्साहको रुपमा लिनु भएको छ कि चुनौतीको रुपमा ?
मेरो अभिनयलाई उचित मूल्याङ्कन गरेर अवार्ड प्रदान गर्नु भएकोमा आयोजक प्रति विशेष धन्यवाद दिन चाहान्छु मैले दुवै विषयलाई संगसंगै लिएको छु । अवार्ड पाउनु भनेको केवल कोठामा सजाएर राख्नु होइन् । आगामी दिनमा आफ्नो अभिनय र कलालाई निखरता ल्याउन थप चुनौती पनि हो ।
९.अन्तमा के भन्न चाहानु हुन्छ ?
विशेष गरी म आम दर्शकको माया ममताले नै यो स्थानमा आएको छु यो अथाहा मायालाई मैले कहिल्यै अवमूल्यन गर्ने छैन् आगामी दिनमा पनि मेरो अभिनय यात्रालाई निखारता ल्याउन आम दर्शकबाट सकारात्मक सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दछु ।
पछिल्लाे - पुडासैनी आत्महत्या प्रकरण : सकियो रवि लामिछानेको बयान, थुनछेक बहस सुरु
अघिल्लाे - रवि लामिछाने ५ लाख धरौटीमा रिहा
नेत्रहिन युवा संघ रुपन्देहीद्धारा सियारीमा चेस खेलकुद तालिम प्रदान
अनलाइनबाट ठगिँदै स्कुले विद्यार्थीदेखि जागिरेसम्म